သုံးပြီး သား Mask နှာခေါင်းစည်းများ ကို လျှော်ဖွတ်မီးပူ တိုက်ပြီး ပြန်လည်ရောင်းချနေသည့် ထိုင်းကစက်ရုံကို ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီး – Na Pann San
သုံးပြီး သား Mask နှာခေါင်းစည်းများ ကို လျှော်ဖွတ်မီးပူ တိုက်ပြီး ပြန်လည်ရောင်းချနေသည့် ထိုင်းကစက်ရုံကို ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီး
Na Pann | March 4, 2020 | International News | No Comments
ကိုရို နာ ဗိုင်းရပ်စ် ခြိမ်းခြောက် မှုကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက် အတွင်းမှာ နှာခေါင်းစည်းများ ပစ္စည်းပြတ်လပ်နေမှုကို အခွင့်ကောင်းယူကာ မမှန်မကန်နည်းလမ်းများနဲ့ စီးပွားရှာချင်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက စက်ရုံတစ်ရုံကို အာဏာပိုင်များ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
မတ်လ ၂ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဆာရာဘူရီစီရင်စုရှိ စက်ရုံတစ်ရုံကို သတင်းအရ ရဲများက ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အသုံးပြုပြီးသား နှာခေါင်းစည်းများကို အဝတ်လျှော်စက်နဲ လျှော်ဖွတ် မီးပူတိုက်ကာ အိပ်သွပ်ပြီး အသစ်ပုံစံနဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချဖို့ ပြင်ဆင်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အလုပ်သမား ၆ ယောက်က နှာခေါင်းစည်းတွေကို ပြန်ရွေးပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ နှာခေါင်းစည်းတစ်ခုအတွက် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁ ဘတ်ရရှိပြီး တစ်ရက်လျှင် နှာခေါင်းစည်း ၃၀၀ ကနေ ၄၀၀ လောက် ပြီးစီးကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေက စက်ရုံမှာတွေ့ရတဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေအားလုံးကို သိမ်းဆည်းပြီး အချို့ကို ကျန်မာရေးဝန်ကြီးဌါနသို့ ပေးပို့ကာ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ဒီနှာခေါင်းစည်းတွေ ဘယ်နေရာကနေ ရောက်လာတယ်ဆိုတာကို စုံစမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံကို တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကို ရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ခွိမျးခွောကျမှုကွောငျ့ နိုငျငံတကာ ဈေးကှကျအတှငျးမှာ နှာခေါငျးစညျးမြား ပစ်စညျးပွတျလပျနမှေုကို အခှငျ့ကောငျးယူကာ မမှနျမကနျနညျးလမျးမြားနဲ့ စီးပှားရှာခငျြတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံက စကျရုံတဈရုံကို အာဏာပိုငျမြား ဝငျရောကျစဈဆေးပွီး ဖမျးဆီးခဲ့ပါတယျ။
မတျလ ၂ ရကျနကေ့ ထိုငျးနိုငျငံ ဆာရာဘူရီစီရငျစုရှိ စကျရုံတဈရုံကို သတငျးအရ ရဲမြားက ရှောငျတခငျဝငျရောကျစဈဆေးခဲ့ရာ အသုံးပွုပွီးသား နှာခေါငျးစညျးမြားကို အဝတျလြှျောစကျနဲ လြှျောဖှတျ မီးပူတိုကျကာ အိပျသှပျပွီး အသဈပုံစံနဲ့ ပွနျလညျရောငျးခဖြို့ ပွငျဆငျနတောကို တှခေဲ့ရပါတယျ။
အလုပျသမား ၆ ယောကျက နှာခေါငျးစညျးတှကေို ပွနျရှေးပွီး အလုပျလုပျနကွေတာကိုတှခေဲ့ရပါတယျ။ သူတို့တှဟော နှာခေါငျးစညျးတဈခုအတှကျ ထိုငျးဘတျငှေ ၁ ဘတျရရှိပွီး တဈရကျလြှငျ နှာခေါငျးစညျး ၃၀၀ ကနေ ၄၀၀ လောကျ ပွီးစီးကွောငျး ထှကျဆိုခဲ့ပါတယျ။
အာဏာပိုငျတှကေ စကျရုံမှာတှရေ့တဲ့ နှာခေါငျးစညျးတှအေားလုံးကို သိမျးဆညျးပွီး အခြို့ကို ကနျြမာရေးဝနျကွီးဌါနသို့ ပေးပို့ကာ စဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျနပွေီး ဒီနှာခေါငျးစညျးတှေ ဘယျနရောကနေ ရောကျလာတယျဆိုတာကို စုံစမျးနကွေဆဲဖွဈပါတယျ။ စကျရုံကို တရားစှဲဆိုနိုငျရနျ ဆကျလကျလုပျဆောငျသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အိန္ဒိယကတော့ ထိန်းမနိုင် တွေဖြစ်လာ ပါပီ…ကိုဗစ်ကြောင့် နယူးဒေလီမှာ မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်တွေ မနိုင်မနင်းဖြစ်လာပြီး အလောင်းတွေကို ထင်းပုံပေါ်တင် မီးရှို့နေရ
အိန္ဒိယ ဒေလီမြို့တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု အဆိုးဆုံးဖြစ်လာ ၊ ဆေးရုံကုတင် မရ ၍ သေဆုံးမှုများဖြစ်
ငါ့မြင်းငါစိုင်းပြီး ကိုယ့်ဇာတ်ကိုယ် မနိုင်တော့တဲ့ အပယ်ခံဘ၀ ထရန့် နဲ့ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်လာ တဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ အမှားများ
၀မ်းသာစရာ သတင်းကောင်း ပါ ဗျို့… COVID-19 . ကာကွယ်ဆေး . လူ တွင် စမ်းသပ် အောင်မြင်ပြီ .